Hery politika maro « Tsy hanaiky horoahina eto izahay ! »
Niverina heno daholo tetsy amin’ny Le louvre Antaninarenina indray omaly ireo vovonana politika heno matetika tato ho ato sy tsy heno efa elabe izay nivoy ny antsoina hoe fanorenana ifotony mialoha ny zava-drehetra.
Anisan’izany ny HFI, TFI, RMTF, Grand rassemblement des refondateurs ary Conférence Souveraine. Miaraka aminay koa ny antoko politika maro. Nohamafisiny fa tsy maintsy atomboka ny fanorenana ifotony eto Madagasikara satria mihorohoro ny vahoaka amin’izao fahavaratra tonga izao. Ho fety sa faty, hoy ny fanontaniana napetrany. Aza manaiky zaraina intsony isika. Ny zava-misy ankehitriny dia miha mahazo vahana eto ny firenena ivelany, mitotongana ny fari-piainan’ny Malagasy, mihanaka ny pesta sy kitrotro ary raha izao no mitohy dia horoahina eto an-tanindrazany ny Malagasy. Tsy hanaiky izany izahay, hoy hatrany izy ireo. Hisy moa ny hetsika hotanterahan’izy ireo ny sabotsy izao raha tsy misy ny fiovana.